Dhaqaalaha Trump oo baaris xoogan lagu sameynaya. – iftiin fm
Dhaqaalaha Trump oo baaris xoogan lagu sameynaya.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waxay manta oggolaatay in dacwad oogaha magaaladda New York la siiyo macluumaad buuxa oo kusabsan dhaqaalaha madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, gaar ahaan diiwaanada la xiriira canshuuraha.
Amarka ay bixisay maxakamaddani ayaa ku soo aadaya iyadoo baaritaan lagu sameynayo Trump ee dhinaca dhaqaalaha ay dacwad oogeyaasha New York sheegeen inay ku eegi doonaan dambiyo dhaqaale oo lagu soo eedeeyay, waxaana go’aanka Maxkamadda Sare uu niyad jab weyn ku noqonayaa madaxweynihii hore, maadaama uu in muddo ah diidanaa in la fasaxo galkiisa dakliga iyo canshuur celinta.
← Barlamaanka hoose ee Narok oo manta meel marinaya Biilka BBI-da .
Dowladda Soomaliya oo farta ku fiiqday dowlad Goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. →